Indawo epholileyo entliziyweni yethafa - I-Airbnb
Indawo epholileyo entliziyweni yethafa
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSerena
Indawo eyonwabileyo kunye nebanzi, eneempahla zokhuni, ezibekwe kumgangatho wesibini wesakhiwo esisembindini weLusiana, kwi-752 m ngaphezu kolwandle.
Indawo yokuhlala enetafile enkulu kunye nekhitshi, igumbi lokulala elibanzi elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela elinefestile enxibelelana negumbi elincinci lokuhlamba. Kumgangatho ophantsi kukho intendelezo yangaphakathi enokuthi isetyenziswe ziindwendwe.
Ibekwe ngokufanelekileyo kwabo bafuna ukonwabela iintaba ngoxolo, kude nezona ndawo zinesiphithiphithi.
Idolophu izolile kakhulu kwaye ngokomlinganiselo wabantu. Awuyi kufumana iivenkile ezinkulu okanye iindawo zokuthenga, eLusiana kukho indawo yeevenkile zokutya, iibhula, iivenkile zepastry kunye namagcisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Serena
Ndizakufumaneka kwiindwendwe zam, ezinokunditsalela umnxeba ukuba ziyayifuna. Ukuhlala imizuzu embalwa ukusuka ehotele, izitshixo zinokunikezelwa kumntu, kunye nexesha lokungena eliguquguqukayo kunye nokuphuma.
Ndiza kukuvuyela ukunika iingcebiso malunga nendlela yokuchitha ukuhlala kwakho apha ePlateau ukuba uyafuna.
Ndizakufumaneka kwiindwendwe zam, ezinokunditsalela umnxeba ukuba ziyayifuna. Ukuhlala imizuzu embalwa ukusuka ehotele, izitshixo zinokunikezelwa kumntu, kunye nexesha lokungena el…